मध्यरातको ट्वीट - व्यंग्य - प्रकाशितः वैशाख ११, २०७४ - नेपाल
सुकिला–मुकिला–फुर्सदिलाहरु चुनावी चटारोमा रहेका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई सामाजिक सञ्जालमा लखेटेको लखेट्यै छन् । अरे बाबा ठाकुरे, निधिजीको धपेडी किन नबुझेको भन्या ? चुनावको घोडादौडले उनी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत जान भ्याएका छैनन् । चुनावमा उनी यस्तरी सक्रिय भएका छन् कि दिउँसो ट्वीट गर्न पनि भ्याउँदैनन् । मध्यराती ट्वीट गर्नु पर्‍या छ, बरा !
मध्यराती ट्वीट गर्दा पनि फुर्सदिलाहरुको एम्बुसमा परिहाल्छन् । गृहमन्त्रीले राती २ बजेर ४१ मिनेटमा ट्वीट गर्दा पनि ट्वीटेहरु ब्यूँझिहाल्छन्, यस्तो र उस्तो भनेर बदख्वाइँ गरिरहन्छन् । दिनभरि दर्जनौँ भाषणभूषणमा चुनावको पक्षमा बोलेको मतलब छैन, मात्र एकपटकको ट्वीटमार्फत निर्वाचनको विपक्षमा बोल्दा एकोहोरो खनिनु जघन्य अपराध हो कि होइन ? के अब हाम्रा गृहमन्त्रीले दिउँसै चुनाव हुन्न भनेर ट्वीटिनुपर्‍यो त, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू ?